BaHuThuTaGabar - Page 395 of 400 - Welcome to Bahuthutagabar
“ထိန်းကွပ်မှူ မရှိလည်းဘဲ……” ယောက်ျားတစ်ယောက်က ထိန်းကွပ်ပေးသူမရှိလို့ ပျက်စီးကြေးဆိုရင် သေချာပါတယ် အဲဒီယောက်ျားက စာရိတ္တသက်လုံမကောင်းလို့ပါ။ မိန်းမတစ်ယောက်အနေနဲ့ အုပ်ထိမ်းသူမရှိလို့ ဖြစ်ချင်တာဖြစ်နေရင် သေချာပါတယ် အဲဒီမိန်းမက မိန်းမကောင်းဖြစ်လာနိူင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးလေ။ လူတစ်ယောက်က အခြားသူရဲ့ဖိအားကြောင့် ကြောက်ရွံ့လို့ ထိန်းသိမ်းနေရတာဆိုရင် ထိမ်းကွပ်မှူဧရိယာပြင်ပရောက်တာနဲ့ သာမန်လူထက် အများကြီး ပျက်စီးသွားနိူင်တယ်။ ထိန်းကွပ်မှူဆိုတာက အခြားသူကထိန်းကွပ်ပေးနေတာထက် အရွယ်ရောက်ပီးသားလူဆိုရင် […]
ကိုယ်နဲ့ ထိုက်တန်သော အရာ
ကိုယ်နဲ့ ထိုက်တန်သော အရာ ================= ကိုယ်နဲ့ မထိုက်တန်တဲ့ အရာဆိုတာ ဘယ်လောက်ပဲ အနာခံပီး ဆုပ်ကိုင်ထားပါစေ အချိန်တစ်ခုရောက်ရင် လက်လွှတ်လိုက်ရတာပါပဲ။ ကိုယ်နဲ့ထိုက်တန်တဲ့ အရာဆိုတာ ကိုယ်က ဘယ်လောက်စွန့်လွှတ် စွန့်လွှတ် အချိန်တန်ရင် ကိုယ့်လက်ထဲမှာ မြဲမြဲမြံမြံ ကျန်ရစ်နေပါလိမ့်မယ်။ ကိုယ်နဲ့ မထိုက်တန်တဲ့ အရာတွေကို ခက်ခက်ခဲခဲ […]
မြန်မာလူမျိုးတွေ စေတနာကောင်းတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘာလို့ အများစု ဆင်းရဲနေကြသလဲ? ကောင်းလိုက်တဲ့ မေးခွန်း။ ဒါကို ပညာရှင် တစ်ယောက်က ဒီလို ဖြေသွားပါတယ်။ (၁) မြန်မာအများစုက (TEAM WORK) အားနည်းတယ်။ မညီညွတ် ဘူး။ (၂) ဘေးကနေ သွေးခွဲရ လွယ်တယ်။ (၃) […]
မိန်းမပီသဖို့ ဆိုရင် =========== ကျိုးနွံစွာနေရမယ်လို့ မဆိုလိုပါဘူး ခေတ်အရ ပွင့်လင်းရိုးသားဖို့လိုတယ်။ မြန်မာဆန်ဆန် အဖွားအိုလို ဝတ်ရမယ်လို့ မဆိုလိုပါဘူး ခေတ်အရ အမြင်မရိုင်းပြီး အမြင်တော်ဖို့ပဲ လိုပါတယ်။ မီးဖိုချောင်မှာ ချွေးတစ်လုံးလုံးနဲ့ အိမ်ထဲမှာ အောင်းနေဖို့မလိုပါဘူး ခေတ်အရ ထိုက်သင့်တဲ့ လွတ်လပ်မှူနှင့် မိမိကိုယ်​ကို တန်ဖိုးထား ထိမ်းသိမ်းပီး […]
စကားပြောနည်း… ——————– အရေးကြီးသည့်ကိစ္စ – ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောပါ။ အရေးမကြီးသည့်ကိစ္စ – ဟာသနှော၍ ပြောပါ။ မပိုင်နိုင်သောကိစ္စ – ဆင်ဆင်ခြင်ခြင် ပြောပါ။ ပိုင်နိုင်သောကိစ္စ – အကိုးအကားနှင့် ပြောပါ။ ပျော်ရွှင်ဖွယ်ကိစ္စ – အချိန်နှင့် အခါကို ကြည့်ပြောပါ။ မပျော်ရွှင်ဖွယ်ကိစ္စ – လူနှင့် […]
အပျိုကြီးဆိုတာ ( စ လိုက်ပါ ဦးမယ် ) အပျိုကြီး ဆိုတာ အပျိူ​​ လေး ဘဝတုန်းက ချေခဲ့သမျှ ခုချိန်မှာ တိုင်ပတ်တာပဲ လေးဆယ်ကျော်မှ ဘဝက စတာ မဟုတ်ဘူး သုံးဆယ်ကျော် တာနဲ့ ဖူးစာက ဆုံးတာ . . မြားနတ်မောင်က […]
တစ်ခါက Jack Ma ပြောတဲ့ သူစိမ်းဆိုတဲ့ တန်ဖိုးကြီးလူသားများ
တစ်ခါက Jack Maပြောဖူးတယ်။ မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်း အရင်းတွေ၊ မိသားစုဝင်တွေကို ဈေးရောင်းတဲ့အခါ သင်ဟာ သူတို့ကို ဘယ်လောက်ဈေးနဲ့ဘဲ ရောင်းရောင်း သူတို့စိတ်ထဲမှာ သင်ဟာ သူတို့ရဲ့ ပိုက်ဆံ ရဖို့လောက်သာ ကြိုးစားနေတယ်လို့ ထင်ပါတယ်၊ သူတို့ကို ဘယ်လောက်ဘဲ ဈေးသက်သက်သာသာနဲ့ဘဲ ရောင်းရောင်း သူတို့က အသိအမှတ်ပြုမှာ မဟုတ်ပါဘူးတဲ့ […]
မိဘကိုလုပ်ကျွေးရန် အခွင့်အရေး (၅) ပါး ၁။ မိဘကို ကျွေးမွေး ပြုစုရန် မိမိမှာ ဖြူစင်သော စေတနာရှိခြင်း။ ၂။ မိမ်ိမှာ ကျွေးမွေးနိုင်သော အင်အားရှိခြင်း။ ၃။ ကိုယ့်ကို မ်ိဘက အားကိုးခြင်း။ ၄။ မိဘများ အသက်ရှင်လျှက်ရှိခြင်း။ ၅။ မိဘများ ကျန်းမာသာယာစွာရှိခြင်း။ […]
ပျော်ရွှင်မှုဆိုတာ…. ကျောင်းတစ်ကျောင်းမှာ ဆရာဟာ ကျောင်းသား ၅၀ ခန့်ကို ဘောလုံးတစ်ယောက် တစ်လုံးစီ ဝေလိုက်တယ်။ ပြီးတော့ ဘောလုံးတွေမှာ ကိုယ့်နာမည်ကို ရေးခိုင်းတယ်။ ရေးပြီးသွားတဲ့အခါ ကျောင်းသားတွေ အားလုံးကို အခန်းထဲမှာ ဘောလုံးတွေထားခဲ့ခိုင်းပြီးတော့ အပြင်ခဏထွက်စေတယ်။ ဆရာက စိတ်ကြိုက် ဘောလုံးတွေကို နေရာ ရွှေ့ပြီးတဲ့အခါကျမှ ပြန်ဝင်လာခိုင်းပြီး […]
“ဘီလ်ဂိတ်၏ အောင်မြင်ရေး မဟာဗျူဟာ (၁၇ ) ချက်” ဘီလ်ဂိတ်ကို မသိတဲ့သူမရှိသလောက်မို့ သူ့အကြောင်း အကျဉ်းပဲ မိတ်ဆက်ပေးထားပါတယ်။ လက်ရှိ ကမ္ဘာ့ အချမ်းသာဆုံး ဘီလျံနာ… မိုက်ခရိုဆော့ကမ်ပဏီထူထောင်ခဲ့သူ… ကွန်ပျူတာနည်းပညာတစ်ခေတ်ပြောင်းလဲနိုင်ခဲ့သူ… အင်မတန်အလုပ်များပြီး အင်မတန်နှလုံးလှတဲ့ ပရဟိတသမား.. ဘယ်လိုမျိုးခံယူချက်တွေက သူ့ ကို စင်မြင့်ထက်ပေါ်ပို့ ဆောင်ပေးခဲ့သလဲ […]
« 1 … 394 395 396 … 400 »